News – The News Post
မြန်မာ နိုင်ငံ အပေါ် အန္တ ရာယ် ရှိ သော သြဇာ လွှမ်း မိုး မှုေ တွ ကို ကာ ကွယ် ရန် အမေရိ ကန် ကူ ညီ မည်
မြန်မာ နိုင်ငံ အပေါ် အန္တရာယ် ရှိ တဲ့ သြဇာ လွှမ်းမိုး မှုေ တွ ကို ကာကွယ် ရန် အမေရိ ကန် ကူ ညီမည် မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင် ရာ …
ရုရှား က ထုတ် S 400 လေကာ စနစ်ဒုံးတွေ ရောင်းချ မှု ဖျက် သိမ်း ခံ ရ သော တရုတ် အမေရိက န် တိုက်စ စ်ကို ဘာ နဲ့ကာမလဲ.
ရုရှား က ထုတ် S 400 လေကာစနစ်ဒုံးတွေ ရောင်းချ မှု ဖျက်သိမ်းခံရ တဲ့ တရုတ် အမေရိကန်တိုက်စစ်ကို ဘာ နဲ့ကာမလဲ. အေ မ ရိ ကန် တိုက် စစ် …
ညီလေး မင်း စာေ မး ပွဲေ အာ င် တ ယ်လေ ကွာ…..
ဟို အရငျ တဈလ လောကျက ဖွဈသှားခဲ့တဲ့ဝှခေါ မွစောပုံပွိုတဲ့ အထဲ ပါသှားခဲ့တာ ညီလေး မငျး စာမေးပှဲ အောငျတယျလကှော😥😥😥 ဟိုအရငျ တဈ လလောကျက ဖွဈသှားခဲ့တဲ့ဝှခေါ မွစောပုံပွိုတဲ့ အထဲ ပါသှား ခဲ့တာပါ …
မြန် မာ တစ် နိုင်ငံလုံး တက္က သိုလ် ဝင် တန်း သိပ္ပံတွဲ ပထမ ဆု ရှင် ….
၂၀၁၉-၂၀၂၀ပညာသင်နှစ် တက္ကသိုလ် ဝင်တန်း သိပ္ပံတွဲ မှာ မြန်မာတ စ်နိုင်ငံလုံး ပထမ ဆုရခဲ့သူက ရန်ကုန် ဒဂုံ (၁) အထက်တန်းကျောင်းက မမေသက်ထွန်း ဖြစ် ပါ တယ်။ အမှတ် စုစုပေါင်း ၅၅၂ …
မြန်​မာ တစ်​နိင်​ငံလုံး အမှ တ်​အ များဆုံး (၆) ဘာသာ ဂုဏ်​ထူး ရှင်​ ထုတ်ေ ပါ် လာ ပြီ
မြန်​မာ တစ်​နိင်​ငံလုံး အမှတ်​အများဆုံး (၆) ဘာသာဂုဏ်​ထူးရှင်​ ထုတ်​​ပေါ် လာပါပြီ Congratulations ပါ တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ၆ဘာသာဂုဏ်ထူးရှင် ​မောင်ဝေယံ လင်းကျော်ကျောင်းဂုဏ်ယော မြို့ဂုဏ်ယောဆောင်နိုင်ခဲ့သူ ရွာရေနံတောင်အုပ်စုမှာ ရှိလာ ခဲ့ပြီ လင်းကျော်ကျောင်းဂုဏ်ယော မြို့ဂုဏ်ယောေ ဆာင်နိုင်ခဲ့သူ …
မြန်မာ့ လက်ရွေးစင် လူ ငယ် တိုက် စစ်မှူး စန်းသော်သော် ဂုဏ် ထူး (၁) ဘာ သာဖြင့် တက္ကသိုလ် ဝင်တန်း စာမေးပွဲေ အာင်မြင်
မြန်မာ့ လက်ရွေးစင် လူငယ်တိုက်စစ်မှူး စန်းသော်သော် ဂုဏ်ထူးတစ် ဘာသာဖြင့် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲအောင်မြင် မြန်မာ့ လက်ရွေးစင် လူငယ်တိုက်စစ်မှူး စန်းသော်သော် ဂုဏ်ထူးတစ် ဘာသာဖြင့် တက္ကသိုလ်ဝ င်တန်းစာမေးပွဲအောင်မြင် မြန်မာ့လက်ရွေးစင်အမျိုးသမီးအသင်း၏ လူငယ်တိုက်စစ်မှူး နှင့် ယူ-၁၉လက်ရွေးစင်အမျိုးသမီးအသင်းခေါင်းဆောင် …
အင်းစိန် အ ကျ ဉ်းထော င် စာ စစ် ဌာန မှ (၄) ဘာ သာ ဂုဏ် ထူး ရှင် ထွ က်ေ ပါ်
အင်းစိန် အကျဉ်းထောင်စာစစ်ဌာန မှ ၄-ဘာသာဂုဏ်ထူးရှင်ထွက်ေ ပါ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအောင်စာရင်းထုတ်ပြန်ရာတွင် အင်းစိန်အကျဉ်းထောင် စာစစ် ဌာနမှ ၄ဘာသာ ဂုဏ်ထူး ရှ င်ထွက်ပေါ် ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ အကျဉ်းထောင်၊အချုပ်စခန်း စာစစ်ဌာန ၁၁ ခုမှ အကျဉ်းသား၊အချုပ်သား …